မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ vzo,gtalk,skype အင်တာနက်ဖုန်းများ ပြောခွင့်ကို ပိတ်ပင် — MYSTERY ZILLION
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ vzo,gtalk,skype မှာ အင်တာနက်ဖုန်းများ ပြောခွင့် ပိတ်ပင်ကြောင်း စာကို ယနေ့6နာရီ ခန့်တွင် စာများရောက်ရှိလာ။ အကြောင်းမှာ အင်တာနက်ဖုန်းများ ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံဝင်ငွေ ကျဆင်းစေကြောင်း ။ တရား မဝင် ငွေပေးချေကဒ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်း ။ ထို့အပြင် ပေးပို့ထားသည့်စာအတိုင်း မလိုက်နာပါက တည််ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ...စသည်တို့ရေးသားပါရှိပါသည်။ ပုံကတော့ ကော်နက်ရှင် မကောင်းသည့်အတွက် မတင်ဖြစ်လိုက်တာကို နားလည်းပေးကျပါလို့.........
1/ပြည်သူတွေ ကျန်းမာကြပါစေ...ချမ်းသာကြပါစေ ရည်ရွယ်ချက်နဲ ့ပါ...
ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်ဗျို ့။ အဲဒါသာတကယ်ဆိုလို ့ကတော့
ကဲ . ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ . . . ရန်ကုန်မှာ အချို့အင်တာနက်ဆိုင်တွေဆို . .နိုင်ငံခြားဖုန်းသီးသန့်ခေါ်တဲ့ဆိုင်အဖြစ်ပြောင်းထားတာတွေ့ဖူးပါတယ် . . . ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆို ဆိုင်ပိတ်ရတော့မှာလား . .
ပိတ်ပိတ်...သူ ့အိမ်မှာနေရင် သူ ့စကားနားထောင်လိုက်ပါကွယ်.....ကြက်တူရွေးကတော်တော် မယ်တော်က ကဲကဲဆိုသလို စားမဲ့၀ါးမယ့်သူတွေလာလိမ့်မယ်..
ဒီမိုး ဒီရေ ဒီလူတွေနဲ့၊
ဒီမင်း ဒီစိုး ဒီမအေ... တွေနဲ့လို့ ပြောင်းဆိုရတော့မယ်။
ပိတ်ကြဟ ... ရှိသမျှအကုန်လိုက်ပိတ်ဟ
အင်တာနက်ဆိုင်တွေက ဖုန်းခေါ်တာကို အဓိကထားပြီး ဝင်ငွေရတာပါ။ နောက်ပြီး စာကိုသေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်လေ ပိုဒေါသထွက်လေပဲ:mad: အဓိက ပြောတာ pfingo နဲ့ skype ပါ။ skype တောင်သိပ်မသုံးပါဘူ: gtalk တွေ vzo တွေက ဘယ်နဲ့ပါလာတာလဲ။ mpt လိုင်းယူထားတဲ့လူတွေကတော့ တော်တော်ဒေါသထွက်နေကြတယ်။ ပါးစပ်ကပြောချင်တာယားနေတာပဲ။ မပြောချင်လို့မပြောတော့ဘူး......... ဟိုဟာဆိုလည်းပိတ် ဒီဟာဆိုလည်းပိတ် မပိတ်တာ သူတို့အပေါက်ပဲရှိတယ်။ ဘာအပေါက်လဲ။ water ပေါက်
bala ရေ အဲ့လာ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဆီ စတင်လှမ်းတဲ့ ခြေလှမ်းပဲ။ သောက်ခွေး။
နောက် ကိုယ့်ဘာသာ ထမင်းစားရင်တောင် ဘယ်နဇွန်းပဲ စားရမယ်။ သူတို့ မျိုလို့ မ၀မှာဆိုးလို့ ဆိုပီး ပိတ်မလားမသိဘူး။
(နိုင်ငံရေးနဲ့ ညိတယ်ထင်ပါက ဖြတ်နိုင်သည်။)
သြော် ... နောက်ဆိုဘယ်တော့မှာ ကျန်တာတွေပါ ပိတ်မလဲမသိဘူး???
ှုIntranet ကနေ Internet ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြောပြီး Internet ကနေ Intranet ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်။
ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုချည်းပဲ မချိမဆန့်အားပေးရမယ့်ပုံပဲ။ YZO , Y-talk , Y-fingo , LOL
MZ ကိုမြင်ချင်ရင် yadanar pon မှာ hosting ထောင်ထားမှပဲရတော့မယ်။ ;P
အသိပညာတိုးအောင်လုပ်ပေးနေတာ .. ဘယ်လိုကျော်ခွရမယ်ဆိုတဲ့နည်းတွေမသိမှာဆိုးလို ့..... ဒါလဲတစ်ခုကောင်းပါတယ် .. သူများနိုင်ငံတွေမှာမရနိုင်တဲ့အတွေ ့အကြုံတွေရတာပေါ့ ... :biggrin: ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွေ ့အကြုံကိုဘယ်သူမှမလိုချင်တာတော့သေချာပါသည် .. ..
ဒါနဲ ့ခုတလော သန်းခေါင်မရောက်မချင်း https ကို Bagan မှာဖွင့်လို ့မရပါ .. MPT မှာရောရလားဟင် ... ပြီးရင်တချို ့ဆိုဒ်တွေ Server not found ချည်းပြနေတယ် .....
ကျော်ရလွန်းလို ့စိတ်ညစ်လာပြီ ...
How stupid new......
ခေတ်နောက်ပြန်ပြေးဆွဲသော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ ..
စောင့်ကြည့်လိုက်အုံးမယ် ဘယ်လောက်အထိသက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာ၊ တကယ်တမ်းတော့ ဒီလောက်ကျယ်ပြန့်တာ ဘယ်လိုလိုက်ပိတ်နိုင်မလဲ။ ရှိနေမှာပါပဲသုံးတာကတော့။ ငွေဖြည့်ကတ်တွေ
ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်မရောင်းရဲရင် လက်သိပ်ထိုးရောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီခေတ်မှာ VOIP ကို နိုင်ငံတစ်ကာမှာ ဒီလောက်သုံးနေတာ နည်းနည်းလည်း လေ့လာကြည့်ကြပါအုံး။
ကျွန်တော်ထင်တာတော. သူတို. VoiP အတွက်သက်သက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခိုင်းဦးမယ်ထင်တာပဲဗျ ၊ နို.မို.ဆို Sky Net (MPS) ကြီးကရောင်းအားတွေကျဆင်းသွားမယ်လေ ပာွင်းပာွင်း:cool:
vzo, gtalk မသုံးရသောနိုင်ငံ.....တောက်!
ကျွန်တော်ဆီမှာတော့ google ကိုပါဘန်းလိုက်ပါပြီAttachment not found.
အကုန်လိုက်ပိတ်နေတာပဲနော့်နိုင်ငံတော်၀င်ငွေတော့တိုးစေ ပြည်သူတွေတော့ကုန်စေပေါ့လေ ကောင်းပါတယ် .........လစာက သိန်းငါးဆယ်လောက်ရောက်အောင် ပြည်တွင်းဖြစ်ပဲအားပေးကြပေါ့ဗျာ နော် ကောင်းပါတယ်
ဟိုတစ်ခေါက်က အဲ့ Access Denied ကိုတွေ့လိုက်သေးတယ်။ အခုတစ်လော ကြားတာက အရင် ပိတ်ထားတာတွေ ဖွင့်ပြီး ဖွင့်ထားတာတွေ ပြန်ပိတ်နေတယ်ပြောတယ်။
မသိတော့ပါဘူးဗျာ .. အဲ့အကြောင်းစဉ်းစားရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အိပ်ယာထဲ ခေါင်းမှီးခြုံအိပ်နေတာကမှ ပိုကောင်းအုံးမယ်လို့ တွေးတွေးမိတယ်.
အဲဒါဆို ကျနော်တို့တွေ အင်တာနက်ဆိုင်သွားထိုင်ရင်
ဘာတွေကြည့် 18+ ပုံတွေကြည့်
ဘာတွေဒေါင်းလုပ်ချ 18+ ပဲ
ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာ တစ်လတောင်ပြည့်သေးတာ မဟုတ်ဘူး.
ဒါလေးနဲ့စားနေရတာကို ...ဒါပိတ်တော့ ဘာလုပ်ရမှာတုန်း......
ဘယ်သူမှတော့ အပြစ်မပြောတော့ပါဘူး...ကိုယ့်ကိုယ်ပဲ အပြစ်လို့ ခံယူလို်ကပါ့မယ်...
ကျွှန်တော် ကို က ကံမကောင်းတာ ပါဗျာ :mad:
နိုင်ငံတော် ၀င်ငွေ ကျဆင်းလို့ မဟုတ်ပါဘူး-
သူတို့ ၀င်ငွေ ကျမှာစိုးလို့ပါ။ ဒါကြောင့်.........................
အပြင်မှာ ရောင်းနေတဲ့ ငွေဖြည့်ကဒ်တွေကို မရောင်းခိုင်းတော့ဘဲ ငါးသိန်းတန်တွေရဲ့ ငွေဖြည့်ကဒ်တွေ ရောင်းသလိုမျိုး
သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းမှာမို့လို့ဖြစ်မျာပေါ့.....................ဒါမှ
နဲနဲ ရောင်းလို့ကောင်းတဲ့ဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာစောင်တွေမှာ ကြော်ငြာ မထည့်ကြပါနဲ့တော့
ခွေးချီးတောင် ရောင်းကောင်းရင် တခြားသူတွေ ရောင်းဖို့ပိတ်ပင်ပြီး
ရောင်းလို့ရတာအကုန်ရောင်း တို့ပြည်သူ့အိတ် ဟောင်းလောင်း သူတို့မှာတော့ အိတ်တွေဖောင်း
[U][I][B]ရောင်းလို့ရတာအကုန်ရောင်း တို့ပြည်သူ့အိတ် ဟောင်းလောင်း သူတို့မှာတော့ အိတ်တွေဖောင်း [/B][/I][/U]
အင်း။ အိတ်တွေဖေါင်းကုန်တယ်ဆိုရင်တော ့... နည်းနည်းလောက်သွားလုရင် ကောင်းမယ်။ ဒီမှာလည်း ခလေးငါးယောက်နဲ ့။ မိန်းမဆယ်ယောက်နဲ့:P မရှာကျွေးနိုင်တော့ငတ်နေတာကြာပီဟီး :P
ဘူတွေ လိုက်အုံးမလဲ :P
ဒီမှာလည်း ခလေးငါးယောက်နဲ ့။ မိန်းမဆယ်ယောက်နဲ့:P မရှာကျွေးနိုင်တော့ငတ်နေတာကြာပီဟီး :P
ဘယ်တုန်းက ရသွားတာလဲဟင်??? ဟီး
တစ်ခုလောက်မေးစမ်းပါရစေ.... ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ဆိုင်အနေနဲ့ ဒါတွေကိုပိတ်လိုက်ရင် ဆိုင်ပိတ်တာနဲ့ဘာမှမထူးပါဘူး...ဆိုင်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းက ဂျီတော့ တွေပဲ သုံးတာများပါတယ်.. သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာလား..သူတို့ပြောတဲ့တည်ဆဲဥပဒေက ဘာတွေလဲဟင်.. သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလိုက်နာရင်ကောဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ... ကျွန်တော်တော့ ဆိုင်မှာ ဘာမှကိုမဖြုတ်တာ.. ဒီနေ့ဆို ဖုန်းဆက်သမားကိုမပြတ်ဘူး ဟီး..... အကြံပေးကြပါဦးဗျာ...
ဒီနေ. The Voice Weekly Journal မှာဖတ်ကြည်.တော. Vzo နဲ. G-Talk ကိုတော.ဘာမှမပြောထားဘူး ၊ သူပြောတာကတော.အဓိက က Pfingo ကိုဆိုလိုတာပဲ။
ဒါဆို Skype ကကော ၊အပေါ ်က Attachment Photo တွေကတော.အကုန်ပါတယ်ပြောတယ်။ ဘာတွေမှန်းကို မသ်ိတော.ပါဘူး၊
Internet ဆိုင်ဖွင်.ထားသူများ PAC လိုင်စင်လျှောက်ထားတုန်းက Form တွေမှာ စည်းကမ်းချက်တွေကို ဒီပေါ ်ကို Scan ဖတ်ပြီးတင်ပေးကြပါလား။
သူတို.ဘယ်လို Agreement တောင်းထားလဲဆိုတာကြည်.ကြတာပေါ.၊တကယ်လို. VoIp နဲ.ပတ်သတ်တဲ. Permission တွေပါမလာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို.ကောင်းကောင်းကြီးComplaint တက်ခွင်.ရှိပါတယ်။ (ကျွန်တော်တို.တွေစည်းလုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ.)
ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှာ Net နဲ.ပတ်သတ်တဲ.Law တွေကိုလွတ်တော်မှာအတည်ပြ ုဖို.အဆိုတင်သွင်းတုန်းပဲရှိပါသေးတယ်၊(အတည်မပြ ုရသေးပါဘူး)။
အဲ.ဒီတောအတွင်းသူတို.ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော. ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံပာာစည်းကမ်းပြည်.၀ပြီးခောတ်မှီဖွံ.ဖြိ ုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သစ်ဆီကို တဆင်.ချင်းတက်လှမ်းသွားပါမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ.တဲ.သူတွေရဲ.စကားအတွက်မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။
အကိုရေ...ဒီမှာက ဘာပဲလျှောက်လျှောက် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သော စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာပါမည်ဆိုတဲ့အချက် ပါတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်သိသလောက်ပေါ့လေ။ အဲ့တော့....ဒါလဲ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်တာပါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ Gtalk တို ့ဘာတို ့မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်။ Gmail တောင်စိတ်မချရတော့ဘူးနဲ ့တူတယ်။ မသိတော့ပါဘူးဗျာ။
လောလော ဆယ် အခု ကျော်ပီးခွပီးသွားနေရတဲ့ ကောင်နက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး... ဆွေးနွေးပေးပါဦး... သူက အချိန်က တိကျတယ်.. 9နာရီကျော်ပိဆိုတာနဲ့ကွတ်တိပဲ.... ကျော်ရမယ်ခွရမယ်ဆိုတာ စတော့တာ.... အဲဒါဘာလို့လဲဟင်... ပီးတော့ ပရော့စီ လေးများရှိရင်မစပါဦး..
ပိတ်မှာ ပါ . အခု အသွင်ကူးပြောင်းလာပြီဆိုတော့ . ဘောင်နဲ့ စည်းနဲ့ ကို သတ်မှတ်ပြီး ပိတ်မှာပါ .
အရင် က tayza economy က နေ အခု ေ၀စားမျှစား economy ဖြစ်လာပါပြီ . ပြည်သူတွေတော့ ဘယ်ပါမလဲ .
သူတို့ ချင်း ေ၀မျှစားရအောင် အားလုံးကို ပိတ်ပြီး ခွဲစားကြမယ့်သဘောပါ . .
ပြည်ပ ဖုန်း တွေ ပြောတော့ ပြောရမယ် သူတို့ လုပ်ပေးတဲ့ ဟာကတဆင့် . အဲဒီလို သဘောပါ . . .
ပြည်သူတွေ က ရပါတယ် သူတို့ ပိတ်လဲ . တခြားဟာလုပ်စားကြရမှာပေါ့ . အလုပ်မရှားပါဘူး . ဆိုက်ကားနင်း ပဲပြုတ်ေ၇ာင်း . အဲဒါတွေ တော့ ဖွင့်ပေးထားမှာပါ . စိတ်မပူပါနဲ့ . .
သူတို့ ကတော့ အလုပ်ကရှားတယ်လေ . လုပ်ပါစေဗျာ . နှစ်နှစ်ဆယ်လုံး ဒီကလူ တွေ အရေထူပြိီးသားပါ .
( မော်မော် တွေ ပြန်ဖျက်ချင်ပါက ဖျက်နိုင်ပါတယ် )
ဒီနေ့ဆိုင်ကို voip ပိတ်ရမည့် အကြောင်းကြားစာရောက်လာတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ကြတော့ဘူးလား
gtalk တို့ vzo တို့မရတော့ရင် ဆိုင်က ပိတ်ရတော့မှာဗျ ကျွန်တော်တို့နယ်မှာက gtalk , vzo ပဲသုံးကြတာ အဲဒါပိတ်တော့ ဆိုင်ပါပိတ်ရတော့မှာပေါ့
ဒေါ်စုကို အင်တာနက်သုံးခွင့်ပေးလိုက်ပီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဇါတ်လမ်းစတာပဲ
satpaing wrote: »
ဟုတ်တယ် ............... ဒီမှာလဲတူတူပဲ မြတ်မလားလို့ လုပ်လိုက်တာ :mad:
အရင်း မပြုတ်ခင် ပြန်ပိတ်လိုက်မှလားမသိဘူး.........:P
မဟုတ်ရင် skynet က ခုမှ လုပ်ခါစ ကို လိုင်းက ဖြတ်ချင်နေတာချည်းပဲဆိုတော့ လုံးလုံးတော့ဖြတ်အုံးမယ်မထင်ဘူး
ပြည်သူတွေကို မျှဉ်းထားအုံးမယ့် သဘောရှိတယ်........
အဲဒါဆိုလဲ ဘာလို့ အင်တာနက် လိုင်းတွေချပေးနေလဲ မသိဘူး.. လိုင်းချမပေးဘူး ပိတ်ထားလိုက်ရင်လဲ ပြီးရော
နယ်မှာဆို ပိုကောင်းတယ်။ သူတို့က လုပ်တည်းက အလုပ်မဟုတ်တာကို လုပ်တော့ ကိုယ်ကလည်း
ဂရုစိုက်မနေနဲ့။ ပြည်သူတွေအဆင်ပြေဖို့ကိုအဓိက မစဉ်းစားဘူး။ ဘာမှဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားcall ၀င်ငွေကျတာကို ကြည့်နေတယ်။ ဒါဆိုလည်း ဖုန်းကခေါ်စေချင်ရင် စျေးတွေချပေးပါလား။ စျေးကျတော့
ခေါင်ခိုက်နေတယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာ ချိတ်ထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေတော့ ခဏဖြုတ်သိမ်းထားပေါ့။ နောက်တော့
လည်း ပြီးသွားမှာပါပဲ၊ သုံးတဲ့လူတွေလည်းဆက်သုံးမှာပါပဲ။ မယုံရင် စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီကိစ္စလွှတ်တော်မှာ အမတ်တစ်ယောက်လောက်က မေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။ voip တွေပိတ်တော့ ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲလို့။
ဒီနေ့ ရန်ကုန်က အသိတစ်ယောက် ဂျီတော့ကနေပြောတာ sky line ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ကို၀င်ဖမ်းတယ်လို့ပြောပါတယ် သူ့ကိုလည်း အသိတစ်ယောက် gtalk ကနေပြောတာလို့ပြောပါတယ်။
ဟုတ်မဟုတ် သိတဲ့သူများ comfirm လုပ်ကြပါအုံး။ မိုက်ရိုင်းနေကြပြီထင်ပါတယ်။
လုပ်တာကိုမကြိုက်ရင် လိုင်းတွေချမပေးနဲ့ မသုံးစေချင်တာကိုပိတ်ထား ရသလိုသုံးကြလိမ့်မယ် ပိတ်မရလို့သုံးကြတာကို ဆိုင်ထိလိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာကတော တော်တော်ရိုင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ် အင်တာနက်သုံးတာကိုများ ဒုစရိုက်အမှုလို လိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်လို့မြင်မိပါတယ် ခွင့်မပြုချင်ရင်အစကတည်းကချမပေးတာပိုကောင်းပါတယ်..။
I am asking for my friend. I use MPT and no problem with any of the voip services. But my friend who use Yadanarbon internet can't seem to connect pfingo. Is there any proxies needed for pfingo from Yadanarbon or WiMax?
Gtalk မသုံးရဘူးလား ရတယ် Pidgin , trillian, Mtalk.......စတာတွေနဲ့သုံးမယ်
vzo မသုံးရဘူးလား ရတယ် oovoo သုံးမယ်ဗျာ
comcraziez wrote: »
ဟုတ်ပဗျာ . .ဂွတ်တယ် . .အဲ့လိုလုပ် . . . ..
စိတ်ညစ်တယ် .... ဆိုင်ကပိတ်ရတော့မှာလား.... ဘာမှလုပ်လို့မရတော့မှတော့.... ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ....... Gtalk, Vzoမှမသုံးရရင်ဘာသွားသုံးကြမှာလဲ...... ခုကြားနေရတဲ့သတင်းတွေက ...အမှန်တွေလားဟင်..... ဆိုးပနော်.... :O:((
ဒီသတင်းအမှန်လားမသိဘူး..... ကြားလိုက်တယ်..ကြောက်လို့ဆိုင်မှာဖုန်းတောင်မခေါ်ပေးတော့ဘူး.... တကယ်ဆိုမလွယ်ဘူး..... စိတ်ညစ်တယ်
gtalk, pfingo, skype, vzo အစရှိသော လို့ စာရောက်လာတာလေ။ သေချာဖတ်ကြပါနော်။
ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ ကြွေးကြော်ပြီး ကွန်ပြူတာပိတ် မီးကိုမှိတ်လို့ အိပ်မက်ထဲမှာပဲ ချစ်သူနဲ့ vzo ပြောတော့မယ်...